SHIRKII WAJAALE EE MUSTAFE CAGJAR IYO MUUSE BIIXI – RA'YI
SHIRKII WAJAALE EE MUSTAFE CAGJAR IYO MUUSE BIIXI
Waxaa maanta magaalada wajaale ee xuduuda labada dal ee somaliland iyo itoobiya shir kuyeeshay madaxwaynaha deegaanka somalida mudane mustafe cagjar iyo madaxwaynaha jamhuuriyada somaliland mudane muuse biixi.
Shirkan ayaa ahaa mid qarsoon oo uu mustafe kala hadlay muse biixi inaysan oromo wax dan ah uhaynin somaliland iyo somali oo dhanba oo ay odayaasha abaagadhaha ah ee somaliland tagay danta oromo oo kali ah ay kuwataan maadaama uu Abiy axmed xidhiidhkii somaliland ay lalahayd itoobiya uu jarayna ay oromo rabto inuusan xidhiidhkoodii ganacsi ee gaar ahaan jaadka iyo khudaarta aysan somaliland iyaduna jarin maadaama oo ay maqleen inay somaliland xidhiidh ganacsi layeelanayso dalka kenya.
Madaxwayne mustafe ayaa kubooriyay somaliland inay jaraan gabi ahaanba xidhiidhka oromada ee dhanka ganacsiga maadaama uu xidhiidhkaasi yahay buu yidhi isha kali ah ee ay somali kaga adkaan karto oromo waana inaan somali ahaan isukaashano si aan cadawga somalida oo ah oromo aan uga guulaysano. Wuxuuna intaa kudaray inay oromo rabto dakadaha soomaalida inay lawareegto waana sababta buu yidhi ay somalida deegaanka itoobiya degta ay dagaalada ugu wadaan oo hadii ay somalida deegaanka soo dhaafaana somaliland wakhti badan kuqaadan mayso inay qabsadaan.
Sidoo kale mustafe ayaa kala hadlay muuse biixi inuu hubka waa wayn kala soo dego dekada barbara maadaama oo ay oromo is hayaan islamarkaana ay isaga iyo madaxwaynaha oromadu si wayn isugu dhacsan yihiin.
Dhankiisa, muuse biixi ayaa soo dhaweeyay aragtida uu mustafe qabo iyo waliba dalabaadka uu sheegtay.
Shirka ayaana kusoo dhamaaday itoobiya wadadii burburka ayay cagta saartaye aan isdaba raacino. WAA GUUL IYO GOBONIMO USOO HOYATAY SOOMAALI.
Previous Post ቀልዱን ይተውን ኦቦ ዳውድ !
Next Post War murtiyeed kasoo baxay jamhada oromada ee ONAG
One thought on “SHIRKII WAJAALE EE MUSTAFE CAGJAR IYO MUUSE BIIXI”
Ina cagjar baa oromada kadaran isagaana horwada ee soomaaliyeey Iska ilaaliya
Leave a Reply to Labihawle Cancel reply